Dowladda kenya oo sheegtay inay qabteen Raashin loo waday Alshabaab – Radio Daljir
Dowladda kenya oo sheegtay inay qabteen Raashin loo waday Alshabaab
Seteembar 8, 2018 11:56 b 0
Maxamed Birik oo ah gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen Raashin Kontorabaan ahaa oo laga qaaday gudaha Soomaaliya,islamarkaana la geeyay gudaha Dalkaaasi,waxaa ayna ku qabteen dhadhaab.
Sidoo kale Guddoomiyaha, ayaa sheegay in waxyaabaha sida sharci darada loogu iib geeyo dalka Kenya ,islamarkaana lagu maal geliyo dagaalamayaasha Al Shabaab.
Waxaa uu sheegay gudoomiyaha in dowladda Kenya ay waddo qorshe ku aadan in ay xirto goob kasto oo Shabaab ay dhaqaallo ka heli layaan.
Guddoomiyaha ayaa digniin u jeediyay ganacsatada iyo dadka wax dhoofiya, isagoona sheegay in ay ka digtoonaadan in ay sharci daro ganacsi ku geliyaan dalka Kenya,Waxaa uuna tilmaamay la tilaabo cad ah laga qaadayo ,islamarkaana sharciga la geyn doono.
Maxamed Birik gudoomiyaha gobalka waqooyi Bari ayaa sheegay waxyaabaha ay qabteen in ay ahaayeen Sokor, saliida cunada lagu kariyo iyo bariis, islamarkaana waxaa uu tilmaamay in xuduuda ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya lagu qabtay.
Xiisad Wali katagaan degaanka Dhumay ee Gobalka Sool (dhegayso)